Remix Mini: Iyo purojekiti inovavarira kuunza Android kuPC zvakajeka | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Zvimwe
Vazhinji vashandisi vanongoda chete sisitimu yekushandisa kuti vaite iwo akakosha mabasa. Kuti utarise email, mawebhusaiti edu atinofarira, kuona bhaisikopo kana kuteerera mimhanzi, isu hatidi kombiyuta ine simba rakanyanya, kana yakadaro yakaoma Operating System.
Kunze kweWindows, OSX, UNIX, BSD (uye zvigadzirwa) uye GNU / Linux, kune mamwe marudzi ehurongwa hwekushanda hwave huri kuwedzera kubva pakauya iyo Smartphone, iine Android neIOS iri inonyanya kufarirwa parizvino. Android, iri iyo yakavhurika kwazvo mune ino kesi, yakatorwa kugadzira mamwe mapurojekiti anotibvumidza kuti tiimhanye kunze kwenharembozha. MuLinux ikozvino tataura nezvazvo, uye ndozvinoitawo varume vanobva Tecnologia.comne ichi chakanakisa chinyorwa.
Zvishoma zvinogona kuwedzera. Ichi ndicho chirevo chechirongwa chitsva chiri muchikamu cheCrowfounding mu Kickstarter, uye izvo zvinovimbisa kutipa komputa ine Android 5 nekukasira, ine dhizaini dhizaini uye hunyanzvi hwetekinoroji, kana zvirinani zvinonakidza kushandisa. Kune izvi ivo vanoshandisa forogo inonzi Remix OS.
Muchokwadi, izvozvi unogona kutenga yekupinda Remix Mini kuburikidza neKickstarter, ndiko kuti, nenzvimbo shoma yekuchengetera uye shoma RAM yemadhora makumi matatu emadhora, sezvo vakambopa vhezheni ye $ 30 iyo yakatengeswa kunze.
Pane chikamu chekubatanidza Remix Mini inoita kunge yakashongedzwa nezvose, taura WIFI, Bluetooth, LAN uye USB chiteshi. Zvese izvi zvinovimbisa simba rekushandisa iro rinenge richiseka.
Ini zvechokwadi ndinofunga chirongwa chinonakidza kwazvo, kunyanya kune vateveri veApple vanogona ikozvino kuve nefoni yavo uye nekombuta, vachifarira mabhenefiti uye masevhisi ayo Google anopa kune ayo anoshanda system. Tichifunga kuti mazhinji esarudzo dzekumhanyisa kana kuteedzera zveApple zvinoshandiswa zvinoenderana nekuwedzeredzwa kana mabhurawuza ewebhu, ndinofunga Mini Remix chave chiri chigadzirwa chakasarudzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Remix Mini: Iyo purojekiti inovavarira kuunza Android kuPC zvakajeka
Francisco Medina akadaro
Ngatirege kukanganwa Android x86 🙂 Ichowo chimwe chirongwa chinoenda kunze uko, asi zvakare vane zvinhu zvekukwiza 😀
Pindura kuna Francisco Medina
kana iri iyo "tafura," inoshamisa.
Ini ndashandisa Android x86 uye haina kugadzikana, nekuda kwechikanda, asi maitiro ekumisikidza uye mamwe ane Android anonyatsonaka kushandisa kubva kuPC
Ini ndaireva tafura, nhasi yangu dyslexia inokonzereswa.
Ini ndapinda iyo projekiti peji uye ini ndaona iyo piritsi, hapana chekugodora avo veMS
Raul P. akadaro
Une chokwadi nezvauri kutaura here?.
Pindura Raul P
Une MS piritsi uye imwe ine Remix OS kuenzanisa….
... kubva zvandakapa pfungwa yangu, maonero.
Pakati pezvakawanda zvakashata uye zvinonetsa maTV TV, iyi forogo yePC inomira uye nekure, dhizaini iri rinotonyanya kunaka kupfuura Lollipop uye rinonyanya kushandiswa pane monitors. Chigadzirwa chikuru.
Ini ndinofungidzira kuti pfungwa dze "mudzi", "xposed" nezvimwe zvakadaro hadzishande pachigadzirwa ichi, handiti?
Ndinoshuva dai tanga tine desktop yakadaro paLinux
Tine katatu ematafura ari nani pane linux
Iyo inyaya yekutora desktop uye kuigadzirisa paunoda.
Icho chinhu changu here kana chinotaridzika senge gnome3?
Iyi huru XD.
Kana iri tekinoroji mbozhanhare muLinux, hapana kufambira mberi, hapana chinonakidza, haugone kana kugadzira yako pachako application yeiyo pakarepo odhiyo uye vhidhiyo musangano.
Parizvino anotaridzika zvakanaka. Iyo ine inoratidzika interface uye yakashongedzwa dhizaini dhizaini ... Zvichava zvakafanira kuti uone kana zvese zvakachena dhizaini kana chiri chaicho chirongwa chatinogona kutora mukana.
Ndinoda kuve nemukana wekuiyedza ndatenda
Iwe wapunyuka iko kukanganisa: «Remix Mini ichiona sechinhu chakasarudzika chigadzirwa kana kuti ndakanganisa.
Phabricator: Iyo Yakazara Platform yeSoftware Development